Alahady 04 jolay 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 04 Jolay 2021
Alahady fahadimy manaraka ny Trinite masina.
Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra "Miorena amin'ny antson'ny Tompo".
Alahady natokana itondrana am-bavaka ny sampana Dorkasy.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny II Tesaloniana 2,13-14 no nangalana ny toriteny.
Ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra dia ny Salamo 108,1-5 no novakiana.
Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 6: « Avia, miondreha »
Tompo ô misaotra, midera ary mankalaza ny Anaranao izahay. Tompo ô, Misaotra Anao izahay noho ny fivimbinanao anay.
Misaotra Anao izahay fa mbola afaka mifanotrona amin’ny sampana Dorkasy amin’izao anio izao. Atreho feno ry Tompo ity fotoana ity.
Tariho izahay ry Tompo hahafahanay mibanjina Anao
FANAMBARANA NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA
Manaraha an’I Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka Izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hohenoinareo, ary aoka Izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. (Deoteronomia 13,5)
!fa manaraha Ahy hianao (Jaona 21,22b)
Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan’Andriamanitra dia tsy misy hanenenany (Romana 11,29)
Tahorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 349,1: »Dera re, laza anie »
fa manaraha Ahy hianao (Jaona 21,22b)
Ray ô, Manatona Anao izahay amin’ny anaran’i Jesoa Kristy,Mamela ny helokay, mamonje anay. Tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Miaiky izahay fa diso Taminao ka mifona sy mibebaka.
Mamela ny helokay ry Tompo ka tehirizo ho Anao izahay.
Taorian’ny vavaka dia nohiraina ny FF 25,1: » Ny voadiko »
Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitra. (Isaia 59,2a)
Ho tezitra mandrakizay va Izy (Jeremia 3,5a)
Fa tamin’ny fahatezerako no namelezako anao . Ary amin’ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao (Isaia 60,10b)
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Apostolika laharana voalohany
DIMY MINITRAN'NY ANKIZY SY NY TANORA
Ny IITesaloniana 5,17 no nangalan’i RAMINO Lalaina mpampianatra sekoly alahady ny hafatra
« Mivavaha ka aza mitsahatra »
Mivavaka rehefa misakafo, matory, mianatra!
Toa adinodino izany fivavahana izany rehefa tonga ny fihibohana mety ho vokatry ny tsy fahafahana mamonjy ny trano fivavahana angamba izany na vokatry ny tsy fahafahana manaraka ny fanompoam-pivavahana ampitain-davitra.
Mbola mivavaka foana isika tsy an-kiato mandra-pahatapitry ny fofon’aina.
Taorian’ny hafatra dia nohiraina ny FFPM 760,4: »Aza mba manadino »
Misaotra Tompo ô fa tsy manadino anay Ianao, mampianatra anay hivavaka tsy an-kiato Ianao. Omeo anay ny Fanahinao Masina hampianatra sy hitarika anay ho any Aminao. Amen
Ny biraom-piangonana RAKOTOMANANA Andry no tompon’anjara amin’izany hoan’ny anio.
Tontosaina ny 11 & 10 aogositra 2021 any Sambava ny Synoda lehibe koa mila entina am-bavaka izany
Feno 50 taona ny Fikambanana Mampiely Baiboly, ary hisy seminera anasana antsika izay hotontosaina ao Antaninarenina ny 5 ka hatramin’ny 10 jolay
Noho ny fahafenoan’ny faha 25 taona niasan’Andriamatoa RAZAFINDRATRIMO Alain dia hisy fanompoam-pivavahana hotontosaina ny 17 jolay 2021 amin’ny 9ora sy sasany
Tontosaina ny 20 jolay amin’ny 10 ora ny « soutenance » hataon’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra.
Ny fanompoam-pivavahana zoma hariva dia naroso amin’ny dimy ora.
Ny maraim-baovao kosa dia amin’ny enina ora sy sasany.
Nambara ny toetry ny vola.
Amin’ity volana ity dia ny Sampana STK, Laika ary RFF no manatanteraka fotoam-bokatra
Amin’ny herin’ny anio dia manatanteraka fanadinana eny amin’ny LMA ny Sampana Sekoly Alahady K6 ka hatramin’ny K10
Ny K1 hatramin’ny K5 kosa dia manao fanadinana ny 18 jolay eto amin’ny tanànan’ny Fiangonana.
Noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy faha 20 taonan’ny RFF dia ny « concert d’orgue » no hanamarihana izany.
Ny komitin’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana dia nisaotra ny mpianakavin’ny Tompo noho ny fahatontosan’ny « Fitafy gasigasy ».
FANKALAZANA NY TSINGERINTAONA VOLANA JONA
Ny Salamo 29,11 no nentina nirary soa ireo mpianakavin’ny Tompo teraka volana jona
« Jehovah hanome hery ny olony; Jehovah hitahy ny olony amin’ny fiadanana »
Jesoa Kristy ô, misaotra noho ny tombon’andro azon’ireto mpanomponao ireto. Tanteraho amin’izy ireo Tompo ny teny firarian-tsoa natolotra azy ireo. Amena
Hira : FF14: » Jesoa apetrako Aminao »
RAKITRA SY FANATITRA
Vavaka fangatahana sy raki-boady:
Fangataham-bavaka ho an’ny zanaka hiatrika fitsarana
Fangataham-bavaka ho an’ny fianarana
Fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahafaham-panadinana
Fisaorana an’Andriamanitra noho ny tombon’andro
Fisaorana an’Andriamanitra noho ny valim-bavaka
Fangatahana ny fomban’Andriamanitra ny fiainana
Vavaka ho an’ny fahasalamana
FFPM 164,1: »Jesosy irery ihany »
FFPM 3,1: » Isaorana anie Andriamanitra »
Tompo ô, misaotra noho ny fitiavanao, sy ny famindramponao. Ataovy tanteraka aty aminay ny Teninao. Arotsahy ny Fanahy Masinao amin’ny mpamaky ny Teny, ny mpitory ny Teny ary aty aminay izay mihaino ny hafatrao. Mitenena Tompo ô fa mihaino izahay. Amen
II Tesaloniana 2:13-17
Miorena tsara ao amin’ny Tompo »
Ny Tesaloniana 2:13-14 no nangalana ny toriteny
Misy hevi-dehibe anankiroa tao amin’ny toriteny:
1) Andriamanitra efa nifidy antsika hahazo famonjena
a) Mifidy anareo:
Isika dia olona nofidin’Andriamanitra. Hatry ny mbola tsy ary izao tontolo izao dia efa nifidy antsika Izy. Nofidiany ho Azy mandrakizay isika ary notsongainy sy nalainy mba hanana anjara ao aminy.
b) Hahazo famonjena:
Tsy ny ezaka ataontsika no ahazoantsika famonjena. Mahazo famonjena isika satria Andriamanitra nifidy antsika mba ho voavonjy.
Ny mpanara-dia an’I Jesoa ihany no mahay mihaino Azy, izay tsy olony kosa dia mamorona korontana satria hoy ny Tompo « Tsy misy olona mahay manatona Ahy raha tsy taomin’ny Ray »
Abrama dia taranaka mpanompo sampy no nofidian’Andriamanitra hanaraka Azy ka handao ny Rainy sy ny reniny ka hanorim-ponenana any Kanana.
2) Izany no iantsoana anareo hahazo ny voninahitr’I Jesoa Kristy
a) Ny fiantsoan’Andriamanitra ny olony:
Fony tsy mbola voaforona na nateraka aza Jeremia dia voafidin’Andriamanitra sy namasininy ka na dia maro aza ny fahalemen’i Jeremia dia tsy nahasakana ny antson’Andriamanitra izany.
Isika rehetra izao ihany koa dia efa voafidin’Andriamanitra sy voantsony ary voatokana hanatanteraka ny asan’Andriamanitra.
b) Velona ao anatin’ny fiainan’ny vahoakany ny Tenin’Andriamanitra ary miombona Aminy ny vahoakany.
Maro ny Sampana eto amin’ny Fiangonana fa matoa ao amin’ny Sampana Dorkasy no misy anao dia voantson’Andriamanitra ho Dorkasy ianao.
Tsy hamelan’Andriamanitra ny olony raha tsy mahatanteraka ny irany. Jona dia nandà ny irak’Andriamanitra ary niala izany hany ka ny trozona no nanatitra azy tany amin’ny toerana nanirahan’ny Tompo azy ary niaritra andro maro tao an-kibon’ny trozona izy.
Ny fifidianan’Andriamanitra ny olona iray dia manome risi-po ny olona iray hanatontosa ny asan’Andriamanitra.
Tsy mampahazo aina ny olon’Andriamanitra ny tsy fahafahany manatontosa ny asan’Andriamanitra na tsy fahafahany miombom-po amin’ny vahoakan’Andriamanitra.
Raha nanaraka fitsaboana tany amin’ny hôpitaly ny Mpitandrina dia nahatsiaro nalahelo satria tsy afaka niaraka tamin’ny mpianakavin’ny Tompo nanatontosa ny Herinandro masina. Soa ihany fa mba afaka nanaraka ny fanompoam-pivavahana tamin’ny « Radio »
Ento sy ampitoero tsara ao amin’ny Tompo ny fiantsoany sy fifidianany anao. Jereny sy karakarainy ary velomin’ny Tompo ny olom-boafidiny.
Apetraho amin’ny Tompo ny fanahianareo ka matokia Azy. Tomoera tsara hahafahan’ny Fanahy Masina manamasina ny tenanareo ka ahazoanareo ny voninahitr’I Kristy.
Ho setry ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena.
Tompo ô, Manoloana ny Teninao, reseo lahatra ny misalasala, aoka tsy ho diso lalana ireo manapa-kevitra.
Entinay am-bavaka Aminao ny ezaka fitoriana ny Filazantsara, Tahio ny rafitra isan-tsokajiny sy ny asan’ny Fiangonana androsoan’ny fanjakanao.
Entinay am-bavaka Aminao ny FJKM Amparibe Famonjena ; ny Sampana Dorkasy, ny Birao sy Komity ary ny Mpikambana ao anatiny.
Trotronay am-bavaka Aminao ihany koa ny Mpitandrina sy ny mpiara-miasa aminy ,ny sampan’asa sy asa ary ny komity sy ny vaomiera.
Entinay am-bavaka Aminao ny mpianakavin’ny finoana sy ireo nangataka vavaka vavaka manokana sy nanao raki-boady rehetra.
Trotroinay am-bavaka ireo tratry ny tsy fahampiana, ny ory sy azom-pahoriana, ny marary, ny mpitondratena sy ny kamboty,!
Ny taninay sy ny vahoakany, ny manam-pahefana sy ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena ihany koa Tompo dia entinay am-bavaka eo anatrehanao. Amen
Izany vavaka izany dia ampiarahanay amin’ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay any an-danitra!
FIRAISANA LATABATRA AMIN'NY TOMPO & FAMARANANA NY FOTOANA
Tsy hianareo no nifidy Ahy fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona. (Jaona 15,16)
Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan’Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. (Romana 11,29)
Famakiana ny tondrozotra
Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana
Mpitendry orga: RANAIVOSON Jacky / SMZM
Nikirakira ny fafana: RABIAZAMAHOLY Mahery
Sary: Voamieran’ny fifandraisana